रु रु जलविद्युतको आइपीओमा ३६ गुणा बढी आवेदन, तपाईंलाई कति पर्ला ? | सुप्रीम खबर
रु रु जलविद्युतको आइपीओमा ३६ गुणा बढी आवेदन, तपाईंलाई कति पर्ला ?
२०७७ चैत्र २२, आइतवार, ८: ५३PM
रु रु जलविद्युतले सर्वसाधारणमा विक्रीमा ल्याएको आइपीओमा ३६ गुणा भन्दा बढी आवेदन परेको छ।
बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको अनुसार आइतबार साँझसम्ममा ९ लाख ५३ हजार ४४२ जना आवेदकबाट १ करोड ३९ लाख ४० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्रीमा ल्याएको आइपीओको ३५.६५ गुणा धेरै हो।
रु रु जलविद्युत परियोजनाले चैत २० गतेदेखि प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यमा २० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल १२० रुपैयाँमा ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ।
कुल निष्कासन मध्ये २ प्रतिशत अर्थात ८ हजार १५४ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत अर्थात २० हजार ३८५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
अघिल्लो लेखमानिगमले फेरी बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, पेट्रोल प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ पुग्यो
अर्को लेखमाकोरोनाका कारण स्थगित भयो भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा